ထိုင်းနိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး ကုန်ပစ္စည်းများကို Online Zoom Application ကနေ ကုမ္ပဏီတိုက်ရိုက် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အထူးအခွင့်အရေးကြီးလာပြီနော်..!!!! ခုလာမယ့်.. စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ကနေ ၅ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်မယ့်.. Top...
ဘန်ကောက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် သွားရောက်နေထိုင်နေသည့် ထိုင်းဘုရင် မဟာဝိဇယလောင်ကွန်း၏ အာဏာအသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဂျာမနီအစိုးရထံ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုသွားမည်ဟု ထိုင်းအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူများက တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာမှုကို ပြီးခဲ့သည့် တပတ်တွင်ပြန်ရုတ်သိမ်းပြီးနောက်...
နေပြည်တော်၊စက်တင်ဘာ ၂ရက် ဂျပန်အစိုးရလှူထားသော ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းများကို အိန္ဒိယအစိုးရက စာကြည့်တိုက်ပစ္စည်းနှင့်ဆော့ဝဲလ်များထောက်ပံ့ရန်အတွက် အိန္ဒိယသံရုံးက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဟု သိရသည်။ သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးH.E. Mr. Saurabh Kumar နှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊အခြေခံပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအကူအညီဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေ၊မာန်အောင်၊ပေါက်တော၊မောင်တောနှင့်မြေပုံမြို့နယ်များတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကျောင်း၁၅ကျောင်းရှိရာ...
စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ကိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ တိတိကျကျ အရေးယူသွားမည် တမူး၊မတ်လ၂၉ရက် ဒေသန္တရအမိန့်အားဖောက်ဖျက်ပြီးလူစုလူဝေးဖြင့်မဂ်လာဆောင်သည့် တမူးမှ ပြည်တော်ပြန်ကို တမူးရဲစခန်းက (ပ)၄၇/၂၀၂၀၊၂၀၁၃ခုနှစ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ(၃၀-က)အရအမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ COVID-19နှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာက ဒေသန္တရအမိန့်များ ထုတ်ပြန်နေခြင်းသည် အများပြည်သူ၏အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်...
Share 1744 Tweet 0
PP003 ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနေဖြင့်လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဝေဖန်နေခြင်းမှာ ရှုံးမှာ ကြောက်သည့်အတွက် ဝေဖန်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ပါတီပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးလှသိန်းကဆိုသည်။ “ကျွန်တော်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ ယုံပါတယ်။ လူဆိုတာက မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိယုံကြည်မှုရှိမှပဲရမယ်။...